युगसम्बाद साप्ताहिक - दुई तिहाईको सरकारका यो गति ?- यादब देवकोटा
Saturday, 04.04.2020, 01:28pm (GMT+5.5) Home Contact
दुई तिहाईको सरकारका यो गति ?- यादब देवकोटा
Tuesday, 09.25.2018, 12:27pm (GMT+5.5)
दशैंको मुखमा दुई प्रमुख घटनाले सरकारलाई गलाएको छ । यी घटना यातायातसंग सम्बन्धित छन् । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्यौं भनेर गर्वगर्ने सरकारलाई यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले घुँडा टेकाइदिए । उनीहरु मौकाको प्रतिक्षामा थिए । पाए दशैं । यातायात व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा नभए अग्रिम टीकट बुकिङ नगर्ने घोषणा गरे भने इन्धन आपूर्ति गर्ने ट्यांकर चालकहरुले पनि हड्ताल गरे । पाँच दिन इन्धन आपूर्ति नहुँदा काठमाडौं लगायत देशभर हाहाहार भयो ।
अन्ततः यातायात व्यवसायीको माग अनुसार १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने भयो । दशैंको शुभकामना सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशत वृद्धिले गरेर दिइयो । सरकारले के गर्नुपथ्र्यो र के ग¥यो भन्ने यसमा बहस र टिप्पणी नगरौं, तर सरकारमा रहेका दलका नेताहरुले सरकार असफल पार्ने खेल भयो भन्ने टिप्पणीमाथि भने केही लेख्नैपर्ने भएको छ।
सरकार असफल पार्न को लागिपरेका छन् ? दुई तिहाईको सरकार कसरी असफल हुन्छ ? आफ्नै कारणले कि विपक्षीको कारणले ? आफ्नै कारणले असफलताको दिशातिर तीब्रगतिमा कुदिरहेको सरकारले आफ्नो उपस्थितिबोध कहीं कतै गराउन सकेको छैन । एकपछि अर्को आकर्षक निर्णय, अनि ती निर्णयहरुको फितलो कार्यान्वयन सरकारको असफलता हो । सरकारले जनताले अनुभूत गर्ने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन । चर्का र आकर्षक भाषण अनि दुई तिहाईको दम्भ देखाएर सरकारको बिरोध गर्नेलाई अरिङ्गलले झै झम्टन निर्देशन दिंदा आम जनतामा कस्तो भान पर्ला ? सरकारले सोचेकै छैन ।
सरकारका नराम्रो कामको बिरोध गर्न नपाइने, सत्तापक्षले गरेका भ्रष्टाचारको कुरा संचारमाध्यममा आउनै नहुने, आए पत्रकारलाई अपराधीलाई जस्तो जेल कोच्ने कामले सरकारले कुन मार्ग तय गर्न खोजेको हो भन्ने प्रष्ट छैन ।
सरकारको आधा वर्षको गतिविधिले जस्तो सरकार बने पनि काम गर्ने संस्कार र संस्कृति नभएपछि मतले मात्रै केही हुँदो रहेनछ भन्ने देखाएको छ । दुई तिहाईको सरकार बने पनि सरकार संचालकहरु बढी गफ, काम कममै व्यस्त देखिएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरु सरकार असफल पार्ने षड्यन्त्र हुन थाल्यो भन्दै कमजोरी लुकाउने प्रयासमा छन् । योभन्दा नालायकी अरु केही होइन । पछिल्लो समय देशमा महिला हिंसा (बलात्कार)का घटना बढ्न थालेको छ । अझ बालिका बलात्कारका घटनाले समाज त्रस्त छ, छोरी जोगाउने चिन्तामा छन् बाबुआमाहरु । सरकार अपराधी पत्ता लगाउन असक्षम भैरहेको छ । अनि यस्तोमा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष नै भन्छन्– “हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटना सरकार बिरुद्धको नियोजित षडयन्त्र जस्तो लाग्न थालेको छ ।”
हिजो जनतालाई संविधान बनेपछि सबै कुरा पाइन्छ भनेर आश्वासन दिए । आज काम गर्न खोजेको हो गर्नै दिएनन् भनेर जनताको ध्यान अन्तै मोडन खोजिंदैछ । अहिले प्रमाणित भएको एउटा तथ्य के हो भने नेपालमा विकास नभएको ऐन, नियम, कानुन नभएर हैन कि नियत, संस्कार र क्षमता नभएर हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौं लगायत देशका अधिकांश क्षेत्रका सडक, खानेपानी, विद्युत तथा भूकम्प पीडितहरुको आवास निर्माणको अवस्था नै काफी छ । यी काम समयमै गर्न केले रोक्यो सरकारलाई ? संविधानको कुन धाराले छेक्यो अनि छेकेको भए सच्याउन कसले रोक्यो ? संसदमा दुई तिहाई बोकेर बसेको सरकारलाई किन यस्तो गाह्रो ?
कामगर्न नसक्ने अनि सरकारमा बसेका दलका नेताहरु सरकार असफल पार्ने षड्यन्त्र हुन थालेको आरोप लगाउँछन् । तर, त्यस्तो षड्यन्त्र कहाँबाट भैरहेको छ भन्ने उनीहरु मुख खोल्न सक्दैनन् । खासमा सरकार असफल सरकारमा बस्नेहरुबाटै भैरहेको छ । जनताको अपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसक्नेहरु सरकारमा बसेपछि सरकार स्वाभाविक रुपमा असफल हुन्छ । अरुलाई दोष दिएर उम्कने अवस्थामा अब कोही पनि छैनन् ।
हिजोसम्म एक वर्षका एक सरकार बनेकाले विकास भएन भन्दै बहुमत माग्नेहरुले बहुमत मात्रै होइन प्रचण्ड बहुमत पाए । अब कामगर्न रोक्ने को ? यसअघि राजतन्त्रले विकास भएन भनियो, त्यो हट्यो, संविधान चाहियो भनियो, त्यो आयो, संघीयता चाहियो भनियो त्यो पनि आयो । अब जनताले सुख पाउनबाट कसले रोक्यो ? रोक्नेहरु सिंहदरबारमै छन् ।
२०१५ सालदेखि यता पहिलोपटक दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । तर, सरकार ट्यांकर चालक र यातायात व्यवसायीसंग घुँडा टेक्छ । यी परिदृश्य देख्दा लाग्छ सरकार हावा भरेको बेलुन हो, जो देख्दा छ अजंगकै देखिन्छ तर, एउटा छेस्कोले पनि फुट्छ । समयमै आवश्यक तयारी गरेको भए, स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयनमा कडाई गरेको भै अहिलेको अवस्था आउने थिएन । सरकारले सुरुमा जुन गति लिएको थियो र जुन उत्साह देखाएर जनतालाई भरोसा दिलाएको थियो त्यो अब मर्दैछ, कारण के हो ? सरकारमा रहेकाहरु र सरकार चलाउने पार्टीका नेताहरुले समीक्षा गर्ने बेला आयो ।